Warshadaha Shiinaha & Warshadaha Wax Soo Saarka iyo Warshadaha | Jrain
Xaraashka Fiberlass & Qalabka
Muraayadaha Jrain waxaa lagu shaandheeyay hal gabal waxaana ku jira weelka qulqulaya oo aan sagxadda lahayn. Qiimaha goleyaasha wax ku oolka ah waxay u oggolaadaan si wax ku ool ah goynta goobta si loo yareeyo qashinka qashinka iyo xirmooyinka xamuulka qaada ee labada dhinacba waxay u oggolaanayaan in la isticmaalo iyada oo aan dhinacna laga helin taageero joogto ah.
Dareemida maqaar-gacmeedka miraha fiberlass-ka ee Jrain ayaa si weyn uga fudud miisan culeyska macdanta birta ah iyo waxyaabaha kujira xayndaabka sare ayaa bixiya iska caabin heer sare ah waxayna u baahan tahay dayactir aad u yar.
Amaan badbaado oo sare ayaa lagu gaadhaa adoo naqshadaynaya muraayad ka kooban muraayad ka saraysa gunta hoose ee xoogaynta gantaalaha culus.
Naqshadeynta muraayadda muraayadaha indhaha laga samaysan yahay waa:
• Resistion Resistant • Si Fudud Loogu Farsamo
Kala-shaandhaynta muraayadaha muraayadaha-caaga ah ee Jrain waxay ka kooban tahay guluubyo fiberglass lagu daray xulasho ahaan shan nidaam oo ah walxaha guntin heerkulka.
Dhamaan xididdada ayaa ku jira aaladda wax lagu dhejiyo ee UV.
Ku-tallaalidda caadiga ahi waxay leedahay astaan ​​guud oo weelka korka ah xagga caagga skid. Dusha sare ayaa la heli karaa markii la codsado.
Qaababka, Cabbirrada iyo Helitaanka
Guddiyada Caadiga ah
25.4mm 38,1 Barxadda 914.4mm X 3048.0mm
25.4mm 25.4mm X 101.6mm leydi 914.4mm X 3048.0mm
38.1mm Barxadda 38.1mm 914.4mm X 3048.0mm
Xaraashka Fiberglass & daboolida waxaa si balaadhan looga isticmaalaa warshadaha kaladuwan sida kiimikada, saxarada iyo waraaqaha, warshada korantada, daaweynta bullaacadaha, cuno sameynta, urta iyo macdanta, cusbada, warshadaha batroolka, iwm.
Hore: Jaranjarada & Gacmaha
Xiga: Alaabada kale
Jaranjarada fiberglass-ka iyo gacansiyada waxay leeyihiin faa iidooyin badan sida hoos ku xusan: 1. Xoog sare iyo saameyn ku yeelashada iska caabbinta: marka la barbar dhigo birta, xoogga fiberlassku waa isku mid. Laakiin jaranjarada fiberka dhalada ah iyo gacma-gacmeedka ayaa ka soo kaban kara saameynta ka dib dartiis wanaagsan. 2. Caabiga iska-caabbinta: Iyada oo ku saleysan xaaladaha dhabta ah iyo xaaladaha adeegga, resin orthophthalic, resin isophthalic iyo resin vinylester, waa la dooran karaa, sidaa darteedna waxaa loo isticmaali karaa waqti dheer iyaga oo ku hoos jira xoogga ...
Farsamayaqaanka jaranjarta fiberglass waxaa loo isticmaalaa kaliya guryaha guryaha laakiin sidoo kale warshado badan sababtoo ah waxqabadka ka-hortagga daxalka, sida daaweynta biyaha, dhirta kiimikada, warshadaha batroolka, warshad-sameeyaha, warshadda korantada, warshadaynta cuntada badda, warshadaha cabitaanka, tallaabada markabka, Warshadda waraaqda iyo xaashiyaha dhijitaalka ah, iwm (136kg) Goobaha Mid-Span Gudiga Miisaanka Meel Furan 1/8 ”(3.2mm) ama kayar muuqaal yar 1/4” (6.4mm) ama ...
Caaryada, Mashiinka Dabaysha ee FRP, Mashiinka Dabaysha ee GRP, Fiberlass-ka Farsamaysan, Dhoolatus gacmeed, Mashiinka Dabaysha Fiberglass,